Sidee Awoodda awooddu u saameysaa lamaanaha | Bezzia
Sidee loollanka awoodeed u saameeyaa lamaanaha
Maria Jose Roldan | 08/06/2021 22:00 | Xiriirka
Awooddu badanaa waa sababaha keena isku dhaca ama dagaalada lamaanayaal badan. Loolanka awoodeed waa mid joogto ah oo caado ah, waana wax aan anfacayn labada is qaba. Arinta ayaa kasii daraysa marka xisbiga awooda helo uu u isticmaalo dantiisa gaarka ah isla markaana aanu u adeegsan inuu ku hagaajiyo xidhiidhka uu la leeyahay kooxda kale.
Maqaalka soo socda waxaan ka hadli doonnaa loolanka awoodeed ee lamaanaha iyo sida ay u dhaawici karto xiriirka.
1 Loolanka awooda labada lamaane
2 Dhibaatooyinka ka dhashay loolanka awoodeed ee lamaanaha
Loolanka awooda labada lamaane
Awood qaybinta labada lamaane ma aha hawl fudud ama fudud. Waa inaad tixgelisaa baahida labada qofba haddii aysan taasi dhicinna, waxay u badan tahay inay wax xumaan ku dambayn doonaan. Waxyaabaha caadiga ahi waxay tahay iyadoo waqtiga laga gudbayo, awooda aan soo sheegnay waa la barbar dhigaa oo qof waliba wuxuu si haboon ugu isticmaalaa waqtiyada qaarkood.
Ma noqon karto in xiriirka gaar ahaaneed, uu yahay qof keliya oo awooddaas leh oo dhinaca kale si fudud isugu koobayo inuu aqbalo go'aannada kan kale. Waqti ka dib, xukunka noocaas ahi wuxuu dhaawac halis ah u geysan karaa lammaanaha iyo sababa inuu xiriirku noqdo mid khatartiisa daciif noqda.
Dhibaatooyinka ka dhashay loolanka awoodeed ee lamaanaha
Loolanka awoodeed ee sida joogtada ah ugu dhaca labada lamaane, waxay sababi kartaa dhibaatooyin aad u tiro badan:
Waxaa dhici karta in loolanka awoodeed ay sabab u tahay labada qof ee doonaya inay qaataan doorka ugu weyn. Labada qof waxay rabaan inay sax ahaadaan markasta, iyagoo sababa isku dhacyo iyo dagaal saacadaha oo dhan. Midkoodna midkoodna ma siinayo gacantiisa inay qalloociso taasina waxay ka dhigeysaa ku wada noolaanshaha runtii mid adag oo adag. Xaaladahan oo kale, waxaa muhiim ah inaad u damqato lammaanaha sida ugu macquulsan oo aad naftaada u geliso kabaha kale.
Si la mid ah, khilaafaad kaladuwan ayaa ka dhalan kara haddii aysan jirin cid ka mid ah lamaanaha, raba inay la wareegaan awood iyo xukun. Amni la'aanta lamaanaha ayaa ah mid aad u muuqata oo tanina waxay ku dhammaaneysaa inay dhaawacdo xiriirka laftiisa. Xaaladdan oo kale, waa lagama maarmaan in la soo bandhigo fikradaha kala duwan halkaasna laga bilaabo in si wadajir ah wax looga qabto.
Marka la soo koobo, loolanka awoodeed ee labada lamaane ayaa loo qaadan karaa inay yihiin wax caadi ah mana ahan inuu noqdo wax xun, ilaa iyo inta xukunka iyo awooda noocaas ah aysan waxyeello u geysanaynin qeybta kale ee lammaanaha. Waa inuu jiraa xoogaa isku dheelitirnaan ah oo ku saabsan awoodda qof kasta uu ku leeyahay xiriirka. Waxa aan u fiicnayn lamaanaha ayaa ah in awood qaybsigan uu sabab u yahay isku dhacyada isdaba jooga ah ee nooc kasta leh.
Hadday taasi dhacdo, waxaa muhiim ah in la fadhiisto oo loo wada hadlo si deggan oo loo sameeyo heshiisyo taxane ah iyadoo loo eegayo xaqiiqda cidda xukunka ku leh lamaanaha. Fikrad ahaan, awooda ayaa gacmaha isbadaleysa iyadoo la raacayo go'aanada kaladuwan ee ay tahay in lagu gaaro cilaaqaadka. Haddii kale xaaladdu waxay noqon kartaa mid aan la adkeysan karin dhammaan xumaanta ay tani u leedahay lamaanaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Xiriirka » Sidee loollanka awoodeed u saameeyaa lamaanaha
Sida jeermiga loogu dilo wax ka mudidda xudunta
Faa'iidooyinka caado u yeelashada socodka